आफ्नो बुबा र यहोवालाई खुसी बनाउने केटी | छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्
यिप्तहले यहोवासित कस्तो वाचा गऱ्यो?
गाह्रो भए पनि यिप्तहकी छोरीले आफ्नो बुबाको वाचा पूरा गरी
चित्रमा हेर त, तिमीले एउटी सानी केटीलाई देख्यौ?— ऊ यिप्तहकी छोरी हो। बाइबलमा उसको नाम लेखिएको छैन। तर उसले आफ्नो बुबा र यहोवालाई खुसी बनाई भनेर चाहिं हामी थाह पाउन सक्छौं। अब हामी यिप्तह र उसकी छोरीको कथा सुनौं है त!
यिप्तह असल मानिस थियो। उसले आफ्नी छोरीलाई यहोवाबारे धेरै कुरा सिकाएको थियो। यिप्तह बलियो थियो। ऊ डराउँदैनथ्यो। त्यसैले लडाइँमा जान इस्राएलीहरूले उसलाई नाइके बनाए।
लडाइँ जित्न सकियोस् भनेर यिप्तहले यहोवालाई प्रार्थना गऱ्यो। लडाइँ जितें भने आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कने पहिलो मान्छे यहोवालाई दिन्छु भनेर पनि उसले वाचा गऱ्यो। घरबाट निस्कने पहिलो मान्छेले जीवनभर यहोवाको बासस्थानमा काम गर्नुपर्थ्यो र त्यहीं बस्नुपर्थ्यो। बासस्थानमा मानिसहरू यहोवाको सेवा गर्थे। तिमीलाई थाह छ, लडाइँ कसले जित्यो? लडाइँ यिप्तहले नै जित्यो! यिप्तह घर फर्कंदा उसको घरबाट सबैभन्दा पहिला को निस्कियो, तिमीलाई थाह छ?—
यिप्तहकी छोरी! यिप्तहका अरू छोराछोरी थिएनन्‌। अब यिप्तहले आफ्नी प्यारी छोरीलाई घरबाट टाढा पठाउनुपर्ने भयो। यिप्तह असाध्यै दुःखी भयो। तर उसले परमेश्वरसित वाचा गरिसकेको थियो। आफ्नो बुबालाई छोडेर टाढा जान यिप्तहकी छोरीले मानी कि मानिन? यिप्तहकी छोरीले गाह्रो नमानी आफ्नो बुबालाई यसो भनी, ‘बाबा, तपाईंले यहोवालाई वाचा गरिसक्नुभयो। तपाईंले त्यो पूरा गर्नै पर्छ।’
हरेक वर्ष यिप्तहकी छोरीका साथीहरू उसलाई भेट्न आउँथे
हुन त, यिप्तहकी छोरीलाई पनि दुःख लागेको थियो। किन थाह छ? किनभने यहोवाको बासस्थानमा सेवा गर्न गएपछि उसले बिहे गर्न पाउने थिइन। अनि उसका छोराछोरी पनि हुने थिएनन्‌। तर ऊ जसरी भए पनि आफ्नो बुबाको वाचा पूरा गर्न र यहोवालाई खुसी बनाउन चाहन्थी। बिहे गर्नु र छोराछोरी जन्माउनुभन्दा यहोवालाई खुसी बनाउनु नै उसको लागि ठूलो कुरा थियो। त्यसैले उसले घर छोडी र यहोवाको बासस्थानमा जीवनभर बसी।
यो देखेर यहोवालाई अनि उसको बुबालाई कस्तो लाग्यो होला?— हो, यहोवा खुसी हुनुभयो, अनि उसको बुबा यिप्तह पनि! तिमी पनि ज्ञानी भयौ, भनेको कुरा मान्यौ र यहोवालाई माया गऱ्यौ भने यिप्तहकी छोरीजस्तै हुनेछौ। अनि यहोवा पनि खुसी, बाबा पनि खुसी!
न्यायकर्त्ता ११:३०-४०, NRV
१ कोरिन्थी ७:३७, ३८
यिप्तह कस्तो मानिस थियो? उसले लडाइँमा जानुअघि यहोवालाई के भनेको थियो?
बासस्थानमा गएपछि यिप्तहकी छोरीले के-के गर्न पाउँदिन थिई?
यिप्तहकी छोरीले जीवनभर के गर्नुपर्थ्यो?
यिप्तहकी छोरीजस्तै हुन तिमीले के गर्नुपर्छ?